About - 1aviagem.com
सबैलाई नमस्कार, तपाईले सुरु गर्नु अघि मलाई लाग्छ कि यो एक माथि उल्लेखित ब्लग हो। lol
तिम्रो के मतलब छ? (मैले पहिले नै वर्णन गरेको छु)
खैर, ध्यान दिँदै वेबमा ब्लगहरू र भ्वाइसहरूको आशय कसरी थियो, पहिलो ब्लगहरू आए, अहिले आर्चुगल भिजिटमा सर्भर भएको छ।
यो एक फरक थियो यो vlog (YouTube मा च्यानलको रूपमा सुरु भयो 1aviagem) र अहिले ब्लग हो। यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो फिर्ता आयो। =)
र किन एक ब्लग खोल्नुभयो भने तपाईसँग पहिले नै vlog छ?
यो आवाज भन्दा सजिलो कारण हो! दिन-दिन चलिरहेको, 8 घण्टा पहिले नै + 1 लन्च घण्टाको साथ, घर + सफाईको साथ + बजारमा जाँदैछ + कुनै पनि दिन-दिन गतिविधि। यो आफैमा पहिले नै धेरै समय खरिद गर्दछ!
अब यो थप गर्नुहोस्: + रेकर्ड भिडियोहरू + सम्पादन गर्नुहोस् + एउटा सङ्ग्रह गर्नुहोस् जुन गीत प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दैन + भिडियो संग भाषण को आवाज को व्यवस्था + संक्रमण बनाओ ... उह! मैले निम्न निष्कर्षमा आएँ: "यो पेशेवरहरूलाई छोड्न सबै भन्दा राम्रो छ ..."
म बस एक शौकिया हुँ, जो यात्रा र स्थानहरु को कथाहरु को बारेमा लेखन प्यार गर्दछ। त्यसैले, ब्लगको साथ सजिलो हुन्छ! आराम कम समय लाग्छ र शौकको अधिक अनुहार पनि र दोस्रो कामको दिन होइन! hehe।
त्यसैले यहाँ यो सम्भवतः सबैभन्दा माथिको स्थान हुनेछ 1aviagem तपाईं संग हुनेछ। यो माइग्रेसन भएको कारण म यहाँ यूट्यूब च्यानलको सामग्री यहाँ ल्याउने छु, सबै चीजको केन्द्रीकृत गर्न। त्यसोभए, टेक्स्टको अन्त्यमा तपाईंले भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। (फेरी गुगललाई फेला पार्न यसलाई फेला पार्न बिना)।
मलाई माइग्रेट गर्न उत्प्रेरित अर्को कुरा यो हो कि म पनि एक यात्री हुँ। र मलाई थाहा छ कि तपाईं लिखित टेक्स्ट खोज्नको लागि सजिलो छ, जहाँ पनि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाईले तपाइँको लिपि व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ। र ती प्रेमीहरूका लागि स्क्रिप्ट आफैलाई योजना र कार्यान्वयन गर्न (जस्तै मलाई) यो यो धेरै सजिलो बनाउँछ! भिडियोमा तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्न ... = ((अहिलेका लागि)
अन्ततः पाठक को दिन को धेरै धावक पनि, पछि हामी # सबै मानव हो र हामी एक तोड आवश्यक छ। यस समयमा एक देशको बारेमा पढ्ने बारेमा? र अझै पनि आफ्नो राहमा पढ्न, पाठमा फर्कन सक्षम हुनुहोस्, र यदि यो स्पष्ट छैन वा यदि गलत छ भने तपाईले पाउनुभएको टिप्पणीहरूमा छोड्नुहोस्। यो अधिक मनोरञ्जन सही हुन्छ?
अनि यो विचार त्यहि नै रहेको छ (ब्लग र भोल) ले संसारभरका मानिसहरू सँगै लैजानुहोस् वा कम से कम दुनियाका कथाहरु, संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्दै, मानिसहरु लाई यात्रा गर्न, पढ्न वा प्रेरणा मार्फत।
र जो कोही कारणका लागि यात्रा गर्न सक्दैनन् (ती क्षणिक रूपमा वा छनौट गरेर) तिनीहरूलाई पनि के बाहिर बाहिर जान्छ र सीमाहरू भित्र जान्छ।
स्वागत छ! = डी
उनी भर्खरै neutered थियो। र त्यसपछि हामी उनलाई मनोरन्जन गर्न उल्टो राख्छौं, ताकि टाँके तान्न नपरोस्। त्यसो भए उनी तपाईंको गोदमा उफ्रछिन् र यस्तो देखिन्छन् ...
यसको प्राकृतिक आवासमा #garfield। खाइसकेपछि, तपाईंको न shar्ग धारिलो बनाउनुहोस्